Nkurɔfo no nwiinwii wɔ aduan ho (1-3)
Yehowa tee wɔn anwiinwii no (4-12)
Wɔmaa wɔn mmoko ne mana (13-21)
Mana antɔ Homeda (22-30)
Wɔkoraa mana no bi so de yɛɛ nkae (31-36)
16 Bere a wotu fii Elim no, akyiri yi Israel asafo no nyinaa baa Sin sare+ a ɛwɔ Elim ne Sinai ntam no so. Ɛyɛ bere a wofii Egypt asaase so no akyi bosome a ɛto so abien no da a ɛto so 15. 2 Afei Israel asafo no nyinaa fii ase nwiinwii tiaa Mose ne Aaron wɔ sare no so.+ 3 Israelfo no guan wɔn ho sɛ: “Sɛ ɛyɛ bere a yɛwɔ Egypt asaase so tena kwansɛn ho we nam,+ na yedi paanoo mee no mpo na Yehowa kunkum yɛn a, anka yɛpɛ. Seesei mode yɛn aba sare yi so sɛ ɔkɔm nkunkum asafo mu yi nyinaa.+ 4 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Mɛma aduan atɔ afi soro ama mo,+ na da biara obiara mpue nkɔfa nea ɛbɛso no da koro,+ na mede bɛsɔ wɔn ahwɛ sɛ wobedi me mmara so anaa wɔrenni so.+ 5 Nanso da a ɛto so asia no+ de, nea wɔfa daa no, wɔmfa no mmɔho+ na wonsiesie.” 6 Enti Mose ne Aaron ka kyerɛɛ Israelfo no nyinaa sɛ: “Anwummere mubehu sɛ Yehowa na oyii mo fii Egypt asaase so ampa.+ 7 Anɔpa mubehu Yehowa anuonyam, efisɛ Yehowa ate anwiinwii a munwiinwii tia no no. Yɛn de, yɛne hena a munwiinwii tia yɛn?” 8 Mose toaa so sɛ: “Sɛ anwummere Yehowa ma mo nam we na anɔpa nso ɔma mo aduan di mee a, ɛno na mubehu sɛ Yehowa ate anwiinwii a munwiinwii tia no no. Yɛn de yɛne hena? Yehowa na munwiinwii tia no, na ɛnyɛ yɛn.”+ 9 Ɛnna Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ: “Ka kyerɛ Israel asafo no sɛ, ‘Mommra Yehowa anim, efisɛ wate mo anwiinwii no.’”+ 10 Bere a Aaron kasa kyerɛɛ Israel asafo no nyinaa wiei no, Israelfo no dan wɔn ani kyerɛɛ sare no so. Wɔnkɔhwɛ a, Yehowa anuonyam na apue wɔ omununkum mu yi.+ 11 Yehowa ne Mose san kasae sɛ: 12 “Mate Israelfo anwiinwii no.+ Ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Anwummere* mobɛwe nam, na anɔpa moadi aduan amee,+ na mubehu sɛ ampa mene Yehowa mo Nyankopɔn.’”+ 13 Na eduu anwummere no, mmoko* bɛhyɛɛ asoɛe hɔ ma,+ na anɔpa no obosu bɛkataa asoɛe no ho nyinaa hyiae. 14 Bere a obosu no woe no, wohui sɛ ade nketenkete bi gugu sare no so+ te sɛ asukɔtweaa. 15 Bere a Israelfo no hui no, wobisabisaa wɔn ho sɛ: “Dɛn ni?” Ná wonnim ade ko. Enti Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛyɛ aduan a Yehowa de ama mo sɛ munni.+ 16 Ahyɛde a Yehowa de ama mo ne sɛ, ‘Obiara mfa dodow a obetumi adi. Monhwɛ nnipa* a wɔwɔ mo ntamadan mu na munhu dodow a mobɛfa, obiara mfa omer*+ baako.’” 17 Israelfo no yɛɛ saa; ebinom faa pii na ebinom nso faa kakraa bi. 18 Sɛ wɔde omer susuw a, nea ɔfaa pii no annya ammoro so, na nea ɔfaa kakraa bi no nso de soo no.+ Obiara faa nea obetumi adi. 19 Afei Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛnsɛ sɛ obiara gyaw bi ma ade kye so.”+ 20 Nanso wɔantie Mose. Ebinom gyaw bi ma ade kyee so, na ɛdɔɔ mmoawa ma ɛbɔnee, enti Mose bo fuw wɔn. 21 Anɔpa biara obiara kɔfa nea obetumi adi. Na sɛ owia ano yɛ den a, na anan. 22 Da a ɛto so asia no, wɔfaa aduan no mmɔho abien,+ obiara faa omer abien. Enti Israel mpanyimfo nyinaa bɛbɔɔ Mose amanneɛ. 23 Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, “Nea Yehowa aka ni: Ɔkyena yɛ homeda, homeda kronkron ma Yehowa.+ Nea mobɛtõ no montõ, na nea mobɛnoa nso monnoa.+ Na nea ɛbɛka no, momfa nsie nkosi anɔpa.” 24 Enti wɔde siei kosii anɔpa, sɛnea Mose ka kyerɛɛ wɔn no, na ammɔn na annɔ mmoawa nso. 25 Ɛnna Mose kae sɛ: “Munni no nnɛ, efisɛ nnɛ yɛ homeda ma Yehowa. Ɛnnɛ de, mokɔ a morennya bi wɔ sare no so. 26 Nnansia na mobɛsesaw, na da a ɛto so ason no de, ebi rentɔ, efisɛ ɛyɛ Homeda.”+ 27 Da a ɛto so ason no, ebinom kɔe sɛ wɔrekɔfa bi, nanso wɔannya bi. 28 Ɛnna Yehowa bisaa Mose sɛ: “Mubebu m’ahyɛde ne me mmara so akosi da bɛn?+ 29 Monkae sɛ Yehowa ama mo Homeda.+ Ɛno nti na da a ɛto so asia no wama mo aduan a mubedi no nnanu no. Enti da a ɛto so ason no, obiara ntena baabi a ɔwɔ; mma ɔnkɔ baabiara.” 30 Enti da a ɛto so ason no, ɔman no dii Homeda.*+ 31 Israelfo frɛɛ aduan no “mana.”* Ɛte sɛ aba fitaa ketewa bi, na ne dɛ te sɛ keeki a ɛwo wom.+ 32 Afei Mose kae sɛ: “Yehowa aka sɛ, ‘Monhyɛ omer ma na monkora so wɔ mo awo ntoatoaso nyinaa mu,+ sɛnea ɛbɛyɛ a wobehu aduan a mede maa mo dii wɔ sare so bere a miyii mo fii Egypt asaase so no.’” 33 Enti Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ: “Fa ahina na hyɛ mana omer baako gu mu na fa si Yehowa anim, na monkora so wɔ mo awo ntoatoaso nyinaa mu.”+ 34 Sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no, Aaron de kosii Adanse Adaka*+ no anim sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛkora so. 35 Israelfo no dii mana mfe 40+ kosii sɛ woduu asaase a nkurɔfo te so so.+ Mana na wodii kosii sɛ woduu Kaanan hye so.+ 36 Ná omer yɛ efa susude nkyem du mu baako.*
^ Nnomaa bi a wɔte sɛ nkokɔhwerew.
^ Omer baako bɛyɛ lita 2.2 (Ennu olonka baako). Hwɛ Nkh. B14.
^ Anaa “ɔman no homee.”
^ Ebetumi akyerɛ “Ɛyɛ dɛn ade?” wɔ Hebri kasa mu.
^ Ɛyɛ adaka a wɔkora kyerɛwtohɔ titiriw so wom.
^ Efa yɛ lita 22 (bɛyɛ olonka 7 ne fã). Hwɛ Nkh. B14.